Shiinaha Fiberglass warshad cajalad is-koolo iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yuniu
Fiberglass is-koolada cajaladdu waxay ka samaysan tahay mesh maroog ah maadada salka u ah waxaana ku darsamay emulsion is-kooda ah. Badeecadu waa is-dhejis, ka sarreeya iswaafaqsanaanta, waxayna ku xoog badan tahay xasilloonida booska. Waa qalab ku habboon warshadaha dhismaha si looga hortago dildilaaca darbiyada iyo saqafyada.
4.Iska caabida alkali wanaagsan
6.Crack iska caabin
7.Biyo-celin & dab-celin la'aan
1.Glass fiber tape-ka waa Dabka, qoyaanka iyo caaryada, dildilaac ma leh, goobooyin.
2.Gypsum board wuxuu xoojiyaa kala goysyada malaasyada wuxuuna dayactiraa dildilaaca, godadka ku yaal darbiga qallalan.
3.Connecting guddiga gypsum, guddiga walxaha, loox adag iyo qalabka xaashida kale.
4. Isku xidhka albaabbada iyo daaqadaha darbiyada darbiyada.
5.Qiyaasta dildilaaca, geesaha iyo kala-goysyada shamiitada dusha ka ah.
6.Waa xoojin joogto ah derbiyada iyo saqafyada.
Marka loo eego cabirka cajaladda is-cabiraya ee fiber-ka ah, filim caag ah, ka dibna ku baakadeysan kartoon.
Raridda: badda ama hawada
Faahfaahinta Bixinta: 15-20 maalmood kadib helitaanka lacag bixinta hore
1.Waa maxay shaqaalahaaga R & D? Shahaadooyin noocee ah ayaad haysataa?
3 xubnood oo ka tirsan cilmibaarista iyo horumarinta caalamiga ah ee maaddooyinka isku dhafan ee dhalada ah, teknoolojiyada sare ee R & D
2.Waa maxay fikraddaada horumarinta wax soo saarkaaga?
Nolosha dadka ka dhig mid ammaan ah oo jawi dhowrsan
3.Ma keeni kartaa astaanta macaamiishaada?
4.Can ma aqoonsan kartaa wax soo saarkaaga?
5.Waa maxay qorshahaaga soo-saarka alaabta cusub?
Waxaa jira soosaarid badeecad cusub rubuc kasta
Hore: Wax soosaarka ballaaran 110g 18x14mesh mesh daaqada albaabka
Xiga: Fibreglass Roving toos ah